Business Administration သင်နိုင်သော ဆရာ၊ ဆရာမ အလိုရှိသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » Business Administration သင်နိုင်သော ဆရာ၊ ဆရာမ အလိုရှိသည်	17
Business Administration သင်နိုင်သော ဆရာ၊ ဆရာမ အလိုရှိသည်
Posted by manawphyulay on Jan 9, 2015 in Business & Economics, Jobs & Careers | 17 comments
We are recruitingateacher in Commercial Assistant Profession
Teacher for Business Administration (BA)	M/F (1) Post
•	Age 30 years and above are preferable.
•	Bachelor Degree from Institute of Economics or relevance BA Certificate, Master degree is preferable
•	5 years Business Experience and2years Teaching Experience
•	Teaching Theory related with practice in working area
•	Good command in written and spoken English is preferable
•	Used to work withacomputer (Microsoft Office)
Submit an application letter with CV or CVT Application, recent passport sized photo and Copy of relevance documents to the reception counter or by e-mail before 25th January 2015.
Contact: 3rd Floor, MRCS Bldg., No. 42, Strand Road, Botataung Tsp., Yangon,
Ph. No. : 01- 383 676, 09 7316 6206, 09 250 640 608
E-mail :	hrcvtmyanmar@gmail.com
Kaung Kin Pyar says: အူးလှဘုန်းအောင်ကို ခေါ်ကြည့်ဘာလား….
manawphyulay says: သူက စာသင်တဲ့ဆရာလားဟင်..
ဖားသက်ပြင်း says: ပိုကာ​ဒေါင်းတာသင်​တဲ့ ဆြာ ဆြာမ​ရော
အလင်းဆက် says: ပညာဒါန(တကယ့် ပညာဒါန) သင်ကြားပေးမှာကို
ဒီလို အလုပ်လိုအပ်တာလေးတွေ ပိုစ့်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်
ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တာလေး တွေ့ရင် လျှောက်လို့ရတာပေါ့
Kaung Kin Pyar says: ငင့်….ဒါဆို…ကြုံတုန်းလေး ကြော်ငြာပြေးကပ်မှ…
Vessel Operation ပိုင်း ၁ ဦးလိုချင်ပါတယ်ချင့်… (အတည်ပြောတာနော်)
အတွေ့အကြုံရှိရမယ်…၊ အီးကောင်းရမယ်..၊ ဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်…၊ ဘီယာ၊ အရက် သောက်ရင် တော်ရုံမမူးနိုင်သူ ဖြစ်ရမယ်…(Vacancy Announcement မှာ မပါ။ အီဂါး…ဇကချပ်)
ဆိတ်ဝင်စားရင် ပြောပါ….။ အီးမေးလ်ပေးမယ်…
manawphyulay says: တကယ်လား ညီမလေး စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိရင် ပြောပေးမယ်လေ…
အလင်းဆက် says: ကျန်တာတော့ …မကိုက်ညီဘူး..
ဘီယာသောက်ရင်..တော်ရုံမမူးသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့တော့ ကိုက်ညီတယ်.. အာ့ဘိုလုပ်ရမဲ
Kaung Kin Pyar says: ဒီတစ်ချက်တောင် အလက်ဆင်း ကျော်နိုင်ပါ့မလား…
ရွာထဲက ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဂဲသားရင်းပါအူးလေ….
Kaung Kin Pyar says: တကယ် ပြောတာ မမနောရဲ့…
ထူးပါဝူး…၊ ကြေငြာလက်စနဲ့ နောက်တထုနော်….။ ခု အသဲအသန်လိုနေတဲ့ထဲ…အကောင့်လဲ ပါတယ်…။ ဂျုတ် ပေါ့လေ…။ Head ကို ပြောတာပါ..။ Shipping အတွေ့အကြုံရှိတာလေး ဦးစားပေးပါတယ်…။ အတော်လဲ တာဝန်ကြီးပြီး…Foreign Company ဖြစ်လို့…နည်းနည်းများ အမှားအယွင်း ရှိရင် အပေါ်က ထောင်းပါလိမ့်မယ်….။ တိကျတာ၊ ကြံဆနိုင်တာ၊ တီထွင်နိုင်တာ…ဘာညာတခြား အရည်အချင်းတွေပါ လိုပါတယ်…။ Financial Statement ထိ ဆွဲနိုင်ရမယ်….။
ရွာထဲကဖြစ်ဖြစ် အသိတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်များ ရှိရင် လက်တို့ပါအူးလို့….
manawphyulay says: Ok လေ ဒါဆို Position အနေနဲ့က ဘယ်အပိုင်းကို တာဝန်ယူရမှာပါလဲ။ တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားရင် လက်တို့လိုက်ပါမယ်နော်…
Nyo Win says: အင်း….ကွက်တိပါပဲကွယ်….
ဖားသက်ပြင်း says: တူးပိစိ့ က​နေ ဇီးဒိုးပိစ့်​ထိရိုက်​တဲ့ ဒတ်​ဆြာအလုပ်​​ကော မ​ခေါ်ဝူးလားဟင်​
manawphyulay says: ခေါ်ဖို့ မခေါ်ဖို့ကို မနော ပုံ အရင် နမူနာရိုက်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်မယ် ဒါဗြဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ဖားသက်ပြင်း says: ​အောင်းမြမင်း
​မပူဇာ​ကောင်းတာ မပူဇာပါနဲ့လား သာမီးရယ်​
မားတို့က မချွတ်​ရင်​ မရိုက်​ဖူး
manawphyulay says: ချွတ်ရိုက်ရအောင် ဆံပင်က အတုမှ မတပ်ထားတာ ငှဲငှဲ…
အလင်းဆက် says: အန်တီနော ရယ်
ဟိုက ချွတ်မှ ရိုက်တာဆိုလည်း ရိုက်ဖြစ်အောင်လို့လေ
ဟိုလေ. . .
တခြား တခုခု ချွတ်ပြီး ရိုက်ပါတော့လား
မျက်မှန်တို့ ဆံညှပ်တို့ ဖနပ်တို့ ပြောပါတယ်
manawphyulay says: ဒါဆို မော်ဒန် နယူးလေး သမီးလေး အလင်းဆက်က အရင်ရိုက်လိုက်တော့….